Iindaba - Yintoni iijenali yedizili?
Yintoni uMvelisi weDiesel?
Ngokusebenzisa injini yedizili kunye nombane, umbane osetyenziselwa ukuvelisa amandla ombane. Kwimeko apho ukunqongophala kombane okanye kwiindawo apho kungekho kunxibelelana nombane wamandla, umvelisi wedizili unokusetyenziswa njengombane wombane ongxamisekileyo.
Imizi-mveliso okanye indawo yokuhlala
Ngokubanzi, iijenreyitha zeshishini zikhulu ngobukhulu kwaye zinokuvelisa amandla amaninzi ixesha elide. Njengoko igama libonisa, kumashishini apho imfuno yamandla iphezulu, zihlala zisetyenziswa. Iijenereyitha zokuhlala, kwelinye icala, zincinci ngobukhulu kwaye zibonelela ngombane ukuya kuluhlu oluthile. Zifanele amakhaya, iivenkile ezincinci kunye neeofisi zokuzisebenzisa.
Umoya opholileyo okanye amanzi apholile
Ukubonelela ngendima yokupholisa yomvelisi, iijenereyitha ezipholileyo zomoya zixhomekeke emoyeni. Akukho zixhobo zangaphandle zisetyenzisiweyo, ngaphandle kwenkqubo yokungenisa umoya. Ukufezekisa le njongo, iijenereyitha ezipholileyo ngamanzi zixhomekeke emanzini okupholisa kwaye ziqulathe inkqubo eyahlukileyo. Iijeneretha ezipholileyo ngamanzi zifuna ulondolozo olungaphezulu kunejenereyitha ezipholileyo ngomoya.
Uluhlu lokuveliswa kwamandla ombane weedizili likhulu kakhulu kwaye lunokwahlulwa ngokufanelekileyo. Ukuqhuba izixhobo zombane okanye izixhobo ezifana nee-ACs, iikhompyuter, iifeni zesilingi ezininzi, njl.njl. Zikulungele ukusetyenziswa eziofisini, ezivenkileni nakwizindlu ezincinci. Ngelixa umvelisi wedizili ka-2000 kVA uya kulungela ukusetyenziswa kwimizi-mveliso emikhulu okanye kwiindawo ezifuna amandla aphezulu.
Phambi kokuba uthenge umvelisi wedizili, kufuneka uyazi iinkcukacha zekhaya / zeshishini. Iijenreyitha ezisusela kwi-2.5 kVA ukuya ngaphezulu kwe-2000 kVA zinokusetyenziswa, kuxhomekeke kwiimfuno zommandla.
Kuzo zombini izigaba zesigaba esinye kunye nezigaba ezithathu zokudityaniswa, iijenereyitha zedizili ziyafumaneka. Khangela ukuba ikhaya lakho / inkampani inonxibelelwano olunye okanye olunezigaba ezithathu kwaye ukhethe umvelisi ofanelekileyo ngokufanelekileyo.
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uzigcine engqondweni xa uthenga i-diesel generator kukusebenzisa amafutha. Fumanisa ukusetyenziswa kwepetroli ngeyure nganye kunye ne-kVA nganye (okanye kW) kunye nokusebenza kwayo ngokufanelekileyo ngokubhekisele kumthwalo.
Iinkqubo zolawulo kunye neenkqubo zolawulo lwamandla
Ukusebenza komvelisi wedizili kuphuculwe ngabavelisi abanesakhono sokutshintsha ngokuzenzekelayo amandla ukusuka kwigridi ukuya kumvelisi ngexesha lokusikwa kombane kwaye ngokuchaseneyo, bonisa isilumkiso (ipetroli ephantsi kunye neminye imiba yokusebenza) kunye nokubonelela uluhlu olubanzi lweedatha zohlalutyo Ngokubhekisele kwimfuno yomthwalo, inkqubo yolawulo lwamandla inceda ukwandisa ukusetyenziswa kwepetroli kunye nokusebenza kakuhle kwejeneretha.
Ukuthwala kunye nobukhulu
Umvelisi onengqokelela yamavili okanye ezo zifakwe kwiindawo zokuphakamisa ngokukhawuleza kunceda ukunciphisa ubunzima bezothutho. Gcina umlinganiso wenkunkuma engqondweni ngokubhekisele kwisithuba esifunekayo ukuze uyixhase.
Ukuba i-generator igcinwe kufutshane, ukukhutshwa kwengxolo ephezulu kunokuba yinkxalabo. Kwezinye iijenereyitha zedizili, kunikwa iteknoloji yokufunxa ingxolo, ethi iyinciphise kakhulu ingxolo eveliswayo.